Al Vicolo del Gallo, indawo yokuhlala kwiziko lembali.
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguLisa
Indawo yokuhlala ekwiziko lembali laseVarallo apho ixesha elidlulileyo kunye nomxube wangoku ukunika iimvakalelo ezinzulu kunye namava. Ecaleni kwesitrato esikhulu ecaleni kweempawu zeVicolo del Gallo ufikelela kwintendelezo engasese nethe cwaka engqongwe zizindlu zakudala ze-'600. Kumgangatho wokuqala ngomnyango ozimeleyo, igumbi labucala elinegumbi lokuhlambela langaphakathi. Ucocekile oluqaqambileyo nolwamkelekileyo olulungele abantu abatshatileyo nabangatshatanga. Ndiyabulela ekungeneni ngaphandle kwegumbi, ukhuseleko kunye nobumfihlo buqinisekisiwe
Indawo ekhethekileyo kwiziko lembali yenza le ndawo yokuhlala ibe yodwa ukuze ikwazi ukubona ilali emnandi ngaphandle kokusetyenziswa kweemoto okanye izithuthi. Amanyathelo ambalwa ukusuka kwiBridge yaseAntonini eyaziwayo kunye nazo zonke iindawo ezikhangayo: ulwandle lokuhlambela oluneeambrela zasimahla kunye nezitulo zedesika, iPinacoteca, iSacro Monte, iSanta Maria delle Grazie, izithili zembali ...
Iikhilomitha ezili-10 kuphela ukusuka kwi-ski slopes
4.88 · Izimvo eziyi-33
Indlu ibekwe kwiziko lembali kwiimitha ezingama-20 ukusuka kwibhulorho yaseAntonini.
Kumgama wokuhamba: iibhari, iindawo zokutyela, iipizza, iivenkile, iigrosari, iiparlori ze-ayisikrimu, iicuba, iivenkile ezithengisa utywala ....
Ukuhlamba elunxwemeni kumgama weemitha ezingama-50
I-Sacro Monte funicular kwi-100 yeemitha
Piazza Vittorio 200 yeemitha
Igalari yemifanekiso iimitha ezingama-50
Ngalo naluphi na ulwazi, iingcebiso kunye neemfuno siyafumaneka! Ukuba unqwenela ukuba singakukhapha ukufumanisa ilali yethu yakudala, sicebisa iindawo zokutyela zasekhaya, iimveliso eziqhelekileyo ... okanye ulumke kwaye ungabonakali.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Varallo